I-BlackBerry yamva nje eyenziwe yinkampani iya kuba nekhibhodi ebonakalayo | Iindaba zeGajethi
Uninzi lwabasebenzisi banamhlanje abanqwenela ukukonwabela i-terminal kunye nekhibhodi ebonakalayo ebonakalayo njengeBlackBerry endala. Ngaphambi kokumilisela i-smartphone yokuqala esekwe kuAndriod, inkampani yaseCanada yayisungule iiterminal ezininzi ngekhibhodi yeklasikhi kunye nenkqubo yayo yokusebenza, inkqubo yokusebenza ethi kwanyanzeleka ukuba ayeke ngenxa yokungaphumeleli kubasebenzisi. Ekupheleni kukaSeptemba, ibhengeze ukuvalwa kwecandelo elihambahambayo, icandelo elijongene noyilo kunye nokuveliswa kwetheminali yenkampani kwaye ethathe i-52% yengeniso yenkampani.
Kodwa ngaphambi kokubhengezwa kokuvalwa, inkampani ibisebenza kwisiphelo esitsha esiza kuthi sifike kwintengiso kungekudala kwaye oko kuya kuba nekhibhodi ebonakalayo yenkampani. Iimodeli ezimbini zokugqibela ezisungulwe yinkampani, i-DTEK 50 kunye ne-DTEK 60 yenziwe yi-TCL, Endaweni yoko ziintsimbi zezixhobo zakho Sele zifumaneka ukuba zithengiswe ngamaxabiso anomtsalane kwaye ngaphakathi apho sifumana isuti yonke yeBlackBerry, isuti esisinika ukhuseleko kunye nesoloko sigxekwa kakhulu kwi-Android.
Ngokuka-John Chen, umphathi wenkampani, ngaphambi kokuvalwa kokugqibela kwesahlulo esihambayo, IBlackBerry isebenze kwisiphelo sendlela, eya kuba yeyokugqibela eyilelwe yinkampani, i-terminal eya kuthi idibanise ikhibhodi ebonakalayo, ikhibhodi ebonakalayo yeBlackBerry, ikhibhodi enokusetyenziswa ngabasebenzisi abaninzi beetheminali ezindala zenkampani.
Asizazi izizathu zokuba kutheni I-BlackBerry isazimisele ukwazisa ii-terminals ngekhibhodi ephathekayo kwintengiso, ukuxhomekeka okuncitshiswe kakhulu kule minyaka idlulileyo ndibulela kumgangatho wezikrini kwiitheminali zanamhlanje. Ngoku kufuneka silinde imifanekiso yokuqala yesiphelo esitsha ukuqala ukucoca.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-BlackBerry yamva nje eyenziwe yinkampani iya kuba nekhibhodi ebonakalayo
I-OnePlus 3T iya kuba yi-smartphone yokuqala yokongeza i-8GB ye-RAM